Neymar Oo Ooyay Ka Dib Markii Barcelona Laga Reebay Tartanka Champions League Xalayto & Xiddiga Juve Oo Aamusiyay - Laacib.net
Neymar Oo Ooyay Ka Dib Markii Barcelona Laga Reebay Tartanka Champions League Xalayto & Xiddiga Juve Oo Aamusiyay
by Saed Balaleti | Thursday, Apr 20, 2017
Neymar ayaa oohin la baroortay ka dib markii Barcelona ay ka hartay tartanka Champions League markii ay barbaro goolal la’aan ah Camp Nou kula galeen Juventus iyadoo lugtii hore looga soo badiyay 3-0.
Barcelona ayaa cadaadis saareysay daafaca Juventus ku dhawaad 70kii daqiiqo ee ciyaarta u danbeysay laakiin waxa ay ku hungoobeen inay gacanta sarre ka helaan daafaca nidaamsan ee kooxda Talyaaniga.
Neymar oo madaale ahaa kulankii xalayto
Mid ka mid ah ciyaartoyda ugu firfircoonaa Barcelona waxa uu ahaa Neymar kaasoo si madaalenimo ah ugu ordayay daafacyada Juventus, laakiin waxa uu noqday mid muraalo dilaacay iyadoo ay kooxdiisa ku hungowday inay mucjiso labaad oo la mid ah tii PSG ay sameyso.
Qeyb ka mid aheyd ciyaarta, ku dhawaad bilowgii qeybta labaad, Neymar waxa uu kubad la dhexmaray lix ciyaartoy oo Juventus ah laakiin sida ay ciyaarta inteeda badan aheyd ciyaaryahan kale oo Juventus ayaa ka horjoogsaday inuu helo darbo goolka ku bartilmaameedsan.
Neymar waxaa sabarsiiyay Dani Alves iyo Cuadrado
Saaxiibkiisii hore ee Barcelona Dani Alves iyo ciyaaryahanka reer Colombia Cuadrado ayaa sameeyay tilmaam ciyaar wanaagsan iyagoo isku dayay inay aamusiyaan oo ay sabarsiiyaan.